Sithole isitifiketi se- "Certifire" ngo-Ephreli 2018
Izindaba Ezinhle Ngeminyaka emithathu sisebenza neWarrington Center UK, ekugcineni sesiphumelele ukuhlolwa nokuhlolwa, sithole isitifiketi se- “Certifire” ngo-Ephreli 2018. Siyaziqhenya ngabo bonke abasebenzi base- “Gallford”! ...
Umndeni ka- "GALLFORD" we-Drop down seal unamalungu amasha！
• IGallford ibingumkhiqizi iminyaka engama-20, sinomnyango wethu wezobuchwepheshe ukuklama umkhiqizo, ukuthuthukisa amathuluzi. Futhi sizenzele. • I-drop down seal ibilokhu ivikelekile futhi inombiko wokuhlola. Ngaphandle kokusetshenziswa komnyango womnyango wamapulangwe, uphawu lwethu lokwehlisa futhi ...
Joyina izandla ukulwa nobhadane. 2021, Sisendleleni
2020 ， Unyaka wosizi olukhulu kakhulu, Unyaka wokuthinteka kwenhliziyo kakhulu, Unyaka wokuningi kakhulu ongawukhumbula. E-China, kuhlale kunombiko wesifo esiwumshayabhuqe lapha nalaphaya, ngaphandle kweChina, umbiko wesifo esiwumqedazwe u-seriou kakhulu ukuze ibhizinisi lokuthekelisa libe nzima kakhulu. Noma kunjalo, i- "Gallford" p ...